HomeArimaha QoyskaMa Doonaysaan In Uu Xidhiidhkiina Guurku Xoogaysto, 4-tan Caado Samee Subax Kasta
Waxa jira caado aad u yar laakiin saamayn weyn weyn ku yeelata nolosha Guurka sida caadooyinka subaxnimo taas oo aan u baahnayn dadaal aad u badan sidoo kale xoojisa xidhiidhka labada qof ee is qaba.
Hadaba waxa aan halkan ku soo bandhigaynaa 4 caado oo lamaanaha ka caawinaysa in ay xoojiyaan xidhiidhkooda hadii ay joogto ka dhigaan suba walba.
1.In Aad Hal Mar Wada Toostaan:
Hadii aad subax walba hal mar hurdada ka wada kacdaan waxa ay idinka caawinaysaa in aad wakhti yar wada qaadataan idinka oo aan ka kicin sariirtiina waliba aad yeelataan sheeko yar ka hor inta ayna u kala dhaqaaqin shaqooyinkiina kala duwan.
2.In Aad Laabta Is Galisaan:
Ma jiro wax ka fiican in ay labada qof ee is qaba laabta is galiyaan bilowga maalintooda waxa ay keenaysaa in uu xoogaysto xidhiidhkooda jacayl sidoo kale waxa ay keenaysaa in ay si aad ah isugu dhawaadaan.
3.In Aad Iska Waraysataan Sidii Aad U Seexateen:
Inta badan dadkeena Somalida Ragg iyo Dumarba ma sameeyaan arintaan laakiin isku day in aad haatan caadadaas iska badasho gacaliyahaaga ama Gacalisadaana ka warayso sidii ay u seexatay waxa ay taasi keenaysaa in uu qofku dareemo in uu danaynayo caafimaadkiisa iyo sidii uu u seexday.
4.In Aad Hal Meel Ku Wada Cuntaysaan:
Marka aad hal mar wada toostaan ee aad wakhti yar sariirta ku wada qaadataan waxa bilaabmaysa in aad diyaar garawdaan inta uu Ninku u diyaar garoobayo shaqadiisa waa in ay Gabadhu sii diyaariso Qureecda kadib hal meel ku wada cunteeyaan waliba is dhaafasadaan sheekooyin xiiso leh hadii ay tahay mid shaqsi ah ama waxyaabo aad soo aragteen intii aad kala maqnaydeen.